Zidane Oo Jawaab Ka Bixiyey Xanta Suuqa Ugu Jirta – Heemaal News Network
Tababaraha Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ku adkaystay in aanu tuuri doonin tuwaalka oo uu kusii dhegsanaan doono kursigiisa, xataa haddii ay jiraan dadyow doonaya inuu shaqada iska casilo.
Zinedine Zidane ayaa maalmihii ugu dambeeyey mugdi la gelinayay mustaqbalkiisa Real Madrid kaddib natiijooyin niyad ah oo ay ka keenayeen horyaalka LaLiga iyo tartamada Copa del Rey iyo Spanish Super Cup oo waqti hore laga reebay.
Los Blancos ayaa hadda ku jirta kaalinta saddexaad ee horyaalka LaLiga, waxaanay 10 dhibcood ka dambaysaa Atletico Madrid oo ciyaar baaqi u tahay, waxaana xaaladdooda sii xumaysay guul-darradii garoonkooda ay ugu xambaarisay Levante.
Zidane oo ka hadlayay shir jaraa’id oo uu Jimcihii ku qabtay magaalada Madrid ayaa la weydiiyey haddii uu shaqada iska casilayo amaba la eryayo, waxaanu ku jawaabay: “Ma garanayo waxa dhici doona. Waxaanu u qalanaa in xili ciyaareedka aanu ku dhamaysano kooxdan. Waxa jira waxyaabo badan oo laga hadlayo oo ku saabsan beddelka tababaraha iyo waxyaabo kale.
“Anigu ma garanayo inaan ahay nin nasiib badan. Haddii ay dadku doonayaan inaan shaqada ka tago, kama tegayo, ciyaartoyduna kama tegayaan.
“Waxa jira hadal-hayn badan oo ku saabsan xaalad deggenaansho la’aan ah. Kuma jirno qaabkayagii ugu wanaagsanaa, waana run, laakiin waxa naga go’an inaanu xaaladda beddelno.”
Real Madrid ayaa dhibaatooyin ku soo dhex jirtay xili ciyaareedkan, waxaanu xaalkoodu sii xumaaday sannadkan cusub ee 2021 iyo bishii ugu dambaysay sannadkii hore oo ay waayeen sirtii guulaha joogtada ah, iyadoo garoonkooduna noqday meel ay naadiyada yaryari usoo guulo doontaan.
Si kastaba, Zinedine Zidane ayaa ku adkaysanaya in xili ciyaareedkan ay wada dhamaysanayaan kooxda, balse wax waliba waxay isku beddeli karaan toddobaadyo gudahood.